Xirfadaha - Xarunta EcoTechnology
Qiimayaasha Our Core
Ballan -qaadka Kala -duwanaanshaha, Sinnaanta, iyo Ka -mid -noqoshada (DEI)
Shaqaalaynta Su'aalaha La Isweydiiyo
AT CET, waxaan aaminsanahay in qof kasta oo inaga mid ah uu leeyahay awood uu isbadal ku sameeyo. Baahida loo qabo in wax laga qabto isbeddelka cimilada oo la dhiso u-gudub caddaalad iyo sinnaan leh oo loo gudbo dhaqaalaha kaarboonka hooseeya ayaa ka degdeg badan sidii hore. Iyada oo ku dhawaad ​​shan iyo toban sano oo saameyn macno leh ku leh bulshadeena, dhaqaalaha, iyo bay'ada, waxaan ognahay in hadafkayagu adiga kaa bilaabmayo.
Guji Halkan si aad u hesho Boosas furan
Fasax, shaqsi, iyo jirro.
13 fasax oo lacag -bixin ah oo ay ku jiraan shan fasax oo sabayn ah oo loo isticmaali doono ikhtiyaarkaaga.
Caymiska caafimaadka iyo ilkaha.
403 (b) qorshaha hawlgabka oo ay la socoto 3% shirkadu 6 bilood kadib
Caymiska Nolosha iyo AD&D
Aragga, caymiska naafada muddada-gaaban iyo muddada-dheer, iyo caymis nololeed oo dheeri ah
Wax badan ka baro faa'iidooyinka halkan.
Waxaan si xamaasad leh u haynaa hawshayada deegaanka
Aad baan u shaqeynaa
Waxaan daryeelnaa macaamiisheena, dadka aan la shaqeyno iyo bulshada
Waxaan ku raaxeysannaa shaqooyinkayaga
Waxaan nahay dad waaya -arag ah, ujeedo leh waxaanna ku salaynaa shaqadayada sayniska
Waxaan ku shaqeynaa daacadnimo
Waxaan nahay dad saaxiibtinimo leh oo dadka oo dhan loo soo dhaweyn karo
Waxaan had iyo jeer weydiinaa "sidee baan xitaa si ka sii wanaagsan u samayn karnaa?"
Waxaan bixinnaa xalal hal-abuur leh, wax ku ool ah oo wax-ku-ool ah
Waxaan helnaa natiijooyin
Waannu samaynaa sidaannu nidhaahno
Xarunta EcoTechnology waxaa ka go'an inay dhisato goob shaqo oo kala duwan, loo siman yahay, oo loo dhan yahay oo dhammaan shaqaaluhu dareemaan soo dhaweyn, ammaan, iyo qiimeyn. Laga soo bilaabo 2020, waxaan bilawnay sahan sannado badan ku saabsan sidii si ka-fiirsasho iyo fikir leh loogu dhex-gelin lahaa ballanqaadkan ururka oo dhan.
Waxaan si joogto ah ula xiriirnaa dadaallada DEI marka ay hormarsan yihiin oo raadinayaan talooyinka shaqaalaheenna, Guddiga, iyo la -hawlgalayaasha dibedda marxaladaha kala duwan ee habkan. Si loo hubiyo in DEI ay noqoto dabeecadda labaad ee qof walba oo si buuxda loogu dhex daray yoolkeenna, waxaan baareynaa toddobo meelood oo hawlgal ah (qiimayaasha urur, maamul, qorsheyn & dabagal, isgaarsiin & hawlgal, horumarinta shaqaalaha, kaabayaasha abaabulka, iyo adeegyada & isdhexgalka) iyo aqoonsiga halkaas oo aan ku horumarin karno dhismayaasha iyo hababka lagu taageerayo DEI.
Waxaan si adag ugu dhiirigelineynaa codsadayaasha kala duwan inay codsadaan. Waxaa laga yaabaa inaad ku darto meeleynta adeegga milatariga iyo shaqo kasta oo la xaqiijiyey oo lagu fuliyay si mutadawacnimo ah. CET waa loo -shaqeeye iyo bixiye fursad loo siman yahay. Haddii aad dhib ku qabtid ama aad u baahan tahay caawimo gudbinta codsigaaga, fadlan iimayl u dir hr@cetonline.org.
Waxaa suuro galiyay waxay ku furantahay daaqad cusub
Xarunta EcoTechnology (CET) waa Loo-Shaqeeyaha Fursado Loo Siman Yahay (EEO). CET waxaa ka go'an siyaasad takoor la'aan iyo fursad loo siman yahay dhammaan shaqaalaha iyo codsadayaasha shaqada.
Waxaad heli doontaa jawaab otomaatig ah markaad shaqo dalbato. Fadlan hubi galkaaga Junk si aad u hubiso inaad naga hesho isgaarsiin muhiim ah. Waxaan kula soo xiriiri doonaa waraysi haddii asalkaagu daboolo baahiyahayaga. Haddii aadan naga maqlin, waxaad heli doontaa ogeysiis iimayl ah markaan xirno booska.
Layliyo iyo Tabarucid
CET ma laha barnaamij mutadawacnimo ah. Si aad wax uga barato barnaamijkeena EcoFellowship ee xirfadleyda soo baxaysa, riix halkan.
Waa sharci daro Massachusetts in loo baahdo ama maamulo baaritaanka beenta lagu ogaado xaalada shaqada ama sii wadida shaqada. Loo shaqeeye ku xad gudba sharcigan waxaa lagu muteysan doonaa ciqaab ciqaabeed iyo mas'uuliyadda madaniga ah. MGL Ch.149, Qaybta 19B